musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Blossom Hotel Houston Yakagadzirirwa Kubuda muZuva Rekupedzisira
Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau
Blossom Hotel Houston, iyo nyowani yepamusoro yezvivakwa yakapihwa nevekunze inozivikanwa Blossom Holding Group, yakagadzirirwa kuvhura madhoo ayo gare gare zhizha rino. Inowanikwa pa7118 Bertner Avenue uye yakavakidzana neThe Texas Medical Center, hotera yemhando yepamusoro inotarisira kuunza nharaunda yeHouston neruzhinji rwevanhu kune zvigadzirwa zvepasi rese, kudya kwakanaka, uye nzvimbo dzezviitiko panzvimbo yekuunza zvese kushanya uye bhizinesi kuguta.
Iro chete hotera yepamusoro yakavakidzana neTexas Medical Center ichapa nzvimbo yekutsvaga nekuvandudza kune vafambi uye nharaunda yemunharaunda.
Blossom Hotel Houston iri kupa inopfuura zana nemakumi mashanu emabasa kuvagari vemuno.
Chikwata cheBlossom Hotel chakaratidza kuzvipira kwayo kunharaunda panguva yemhepo inokuvadza yechando gore rino, kugadzirisa mapaipi akaputika uye kubatsira mhuri dzinosvika zana nemakumi maviri nemari yakakwana.
"Zvisinei neyakaomesesa mwedzi gumi nemasere yadarika, isu kuBlossom Hotel Houston takatsiga mukuzvipira kwedu mukusimudzira hupfumi hwenzvimbo uye nekuita zvakanaka munharaunda yese," akadaro Pete Shim, maneja mukuru weBlossom Hotel Houston. "Tiri kukoshesa kupa mabasa kune vagari veko mabasa anopfuura zana nemakumi mashanu uye tiri kupa nzvimbo nyowani yekuti vagari veko vaungane nekupembera nevadiwa."
Blossom Hotel Houston munguva pfupi yapfuura yakaratidza kuzvipira kwayo kunharaunda yemuno panguva yemhepo inokuvadza yechando kutanga kwegore rino. Chikwata chemuhotera, chinotungamirwa nemuridzi Charlie Wang, chakabatsira vashandi nenhengo dzemunharaunda nekushandisa kambani yekuvaka yaWang kugadzirisa pombi dzakapiswa, zvichibatsira mhuri dzinosvika zana nemakumi maviri nemari yakazara yakazara yakafukidzwa naWang. Iwo mweya wemunharaunda uchaenderera mberi mune ramangwana nehurongwa hwekufumisa Houston nekupa akasiyana zvipo zvekubatsira uye zvemagariro.
Blossom Hotel Houston ichabatsira vashanyi kuwana izvo zvinoita kuti Houston ive yakasarudzika uye yakasarudzika nzvimbo yekushanyira. Kubva panzvimbo yayo yepakati padyo neNRG Stadium, dunhu rinozivikanwa remuseum, kushopu, kudya nekuvaraidza, hotera nyowani ichagamuchira vashanyi kuti vaone nzvimbo dzayo dzinonakidza pamwe nekumutsiridza uye kuzorodza nzvimbo ine zvigadzirwa zvepamusoro, zvekugamuchira vaenzi pasi rose, uye zvakanaka kunodya. Ndiyo chete hotera yemhando yepamusoro yezvivakwa yakavakidzana nenzvimbo hombe yekurapa pasi rese, ichipa vashanyi chiitiko chepamusoro chekugamuchira vaenzi panguva yekuenda kumisangano uye maitiro.
Sekugunun'una kumoniker weHouston seSpace City, hotera yacho ine dhizaini-rakafemerwa dhizaini ine minimalist dhizaini, pendi pende uye marongero akanyorovera anogona kuwanikwa munzvimbo yese. Nzvimbo dzemusangano dzehotera idzi dzinewo mazita akafemerwa nemwedzi anongedzera kuhukama hwepfuma nenhoroondo yemuchadenga yenzvimbo uye kukwezva kwayo kwepasirese.